नेयमारले क्लब छोड्ने संकेतपछि ग्रिजम्यानलाई अनुबन्ध गर्ने दौडमा पिएसजी – MeroOnline Khabar
काठमाडौंः एट्लेटिको मड्रिडका स्टार एन्टोइन ग्रिजम्यानले क्लब छोड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनलाई अनुबन्ध गर्न स्पेनिस क्लब बार्सिलोना लागि परेको छ ।
तर, फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) समेत ग्रिजम्यानलाई अनुबन्ध गर्ने दौडमा छ । सुपरस्टार नेयमारले क्लब छाड्न सक्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर पिएसजी ग्रिजम्यानलाई अनुबन्ध गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
बार्सिलोनालाई पछि पार्दै ग्रिजम्यानलाई पेरिस उतार्ने योजनामा पिएसजी रहेको बताइएको छ । पिएसजीले ग्रिजम्यानलाई आकर्षक तलब–सुविधाभन्दा दिएर भित्र्याउने कसरत गरिरहेको छ ।
स्पेनिस मिडिया ‘मुन्डो डेपोर्टिभो’ले केही दिन अघि ग्रिजम्यानकी दिदी र उनका एजेन्ट तथा पिएसजीका अधिकारीबीच स्पेनमा बैठक भएको छ । र, बैठकमा सम्भावित सरुवाबारे छलफल समेत भएको छ ।
२०७६ सालमा यी ६ राशिलाई पर्दै छ महाँसंयोग सहितको भाग्यफल, कुन राशिलाई कस्तो फाईदा देखि असर
ज्योतिषहरुका अनुसार सूर्यले लामो समय पश्चात आइतवारका दिन राशी परिवर्तन गर्न गईरहेको छ। आइतबार सूर्यकै बार पनि हो। यहि दिन मर्यादा पुरुष भगवान श्री रामको जन्मदिन पनि रहेकाले सूर्यले राशी परिवर्तन गर्दा महासंयोग बन्न जाने हुन्छ
← मुसाले रक्सी पिएपछि..
हरेक दिनको यो ९० मिनेट हुनेछ अशुभ ! यी समयमा गरेको काम कहिले पनि सफल हुँदैन ! →